Uma ukwakhiwa indlu, ngokushesha noma kamuva, kuyoba nombuzo - yiziphi izinto ezizoqedela umcabango wendlu. Futhi kungcono uma ulindele ukubukeka kwekhaya lakho kusasa kusengaphambili. Indlela enomthelela ekukhetheni impahla ebhekene nayo iyisihluthulelo sempumelelo yonke ibhizinisi.
Kulesi sihloko, ake sikhulume ngokuthi yiziphi izinto ezifaneleka kangcono ukubhekana nesigcawu somuzi noma ukhuni. Muva nje, lesi sihlahla sesithandwa kakhulu futhi. Ukuhambisana kwezinto eziphilayo, ngokuhambisana nenkokhelo yesiko, kudonsela inani elikhulayo labantu. Kodwa futhi ibeka imingcele ethile ekukhethweni kokuqedwa.
Yiziphi izinto ezingasetshenziswa ukuqeda isakhiwo sezindlu zokhuni?
Okuvamile kunazo zonke namuhla yi-plaster, isitini sezitini , ama-facade anezinwele, ama- siding nama-panels ane-tile clinker. Khetha kusuka kule sidingo, ngokusekelwe kokuthandayo, amakhono wezezimali, izifiso zokuklama kwesakhiwo. Ngakho-ke, cabangela izinketho ezibalulwe ngokuningiliziwe:
I-Plaster . Le ndlela yokuqedela izindonga zendlu yokhuni idinga ukulungiselela kwangaphambili, ngoba ama-plaster awawa phezu kwamapulangwe. Okokuqala udinga ukubeka ungqimba wokungena kwamanzi, lungisa i-crate phezu kwalo bese uqala ukubeka. Ungasebenzisa ingxube yensimu yesanti noma i-plaster yokuhlobisa - konke kuxhomeke emcabangweni wakho namakhono.
Isitini se-Facade yisisombululo esihle kakhulu. Phakathi kwezinzuzo zayo: amandla engeziwe ezakhiweni, ukuthungwa okufudumele, ukuvikelwa isikhathi eside ngokumelene nokubhujiswa nokulimala kwesihlahla. Kodwa-ke, akunakwenzeka ukuqala ukubhekwa kwezindlu zokhuni ngezitini, kuze kube yilapho isakhiwo sonke sesomile ngokuphelele futhi inqubo yokugubha kwayo isiphelile. Njengoba ukugqoka kuqondiswe ngqo ezindongeni ngosizo lwezinsimbi zensimbi, inqubo yokuqothula ingaphazamisa amandla esakhiwo.
I-facade enezinyosi yiqembu elibanzi kakhulu, lifaka izinto ezihlukahlukene zokuqoqa izindlu zokufaka izindlu, kufaka phakathi izinkuni. Igama alilona ngengozi, ngoba amapuleti wokugqoka asekelwe esakhiweni esakhiwe ngaphambili esakhiwe, ehlanganiswe ezindongeni zesakhiwo. Lokho okuzoba yinto yokuqeda ibhizinisi lakho. Amapulangwe angamapulangwe kukhona amapulasitiki, ama-composite, i-granite nensimbi. Yikuphi kulezizinto zokwakha ezibhekene nesigcawu somuzi wezingodo kungcono, mhlawumbe ngeke usho. Konke kuncike ekuthandeni, isabelomali, amathiphu womklami nezinye izici.
Ukugqoka isakhiwo esihle sokuqeda indlu yokhuni. Imakethe yezakhiwo zokwakha inikeza izinhlobo ezimbili - i-vinyl siding ne-PVC. Phakathi kwezinzuzo ezisobala zalolu hlobo lomhlobiso - ukufakwa okusheshayo, izindleko eziphansi, ukubukeka okukhangayo. Futhi, okubalulekile ukwakhiwa kwesakhiwo sefreyimu ngesisekelo esibuthakathaka, ukugxeka akuyona neze inzima futhi kuyomelana nanoma yikuphi ukwakhiwa.
Amapaneli we-thermal ane-tile ye-clinker - okunye okusetshenziselwa ukuqedela okwakusimanje. Kuyinto ipulasitiki ye-polyurethane, lapho kufakwe khona amathayili wangempela e-clinker. Ukuwabeka kungakhona ngqo odongeni, ngaphandle komsebenzi wokulungiselela. Ziyakhanya, zithwale umsebenzi owengeziwe wokugaya ukushisa nokushintsha kwamanzi izindonga. Futhi phakathi kokufaneleka kwalokhu kusebenza - akesabi umlilo, izinga lokushisa eliphezulu, imvula, izinguquko zokushisa.
Ukunquma ukuthi yiziphi izinto ezibhekene nesigcawu sekhaya lefreyimu kungcono, udinga ukwazi kahle ukuthi ufuna ukuthini ekugcineni. Ukubuka izithombe ezinokuphela okuhlukile kufanele kusize.
Amakhetheni ekamelweni labantwana lomfana
Amaphaneli akhiwe ngokhuni
Ipeyinti yefriji ye-fiberglass
I-fence eyenziwe ngokhuni
Ukulungiswa kokukhanyisa ukufaka
UNina Agdal uhlangana nendodana kaChristie Brinkley
U-Kate Blanchett utshele mayelana nesifazane nesimo sakhe sengqondo kuHarvey Weinstein
Amageyimu wezemidlalo wokubhukuda
Isaladi ne-salmon ebomvu
Ubulili bokuqala - ukuthi ungalungisa kanjani nokuthi ungaziphatha kanjani phakathi kocansi bokuqala?
Izwe elizungeze izingane zasenkulisa
Izinsini zokuphuza - yini okufanele uyenze?
U-frontman we-Rock band AC / DC ulahlekelwa ukuzwa!
Ukubalwa kwezibalo kwesikhathi
11 Amantongomane adla, akhula ngokungafani
Ukuvulwa komkhosi we Cannes: Cruz, Blanchett, Stewart, Moore kanye noHargeyt banikeze izithombe ze-chic
Ubufakazi bokuthi akufanele uthembe iphakethe elihle
Ukuvuvukala kwe-periosteum yezinyo